Chishanu, July 14, 2006 Chipiri, July 4, 2017 Douglas Karr
Dell akatangisa kuvhara kwavo svondo rino, One2one. Pakave nezvakawanda zvekunyora nezvazvo pane blogosphere ... vamwe vanhu vachivarumbidza uye vamwe vachiva lynching. Handina chokwadi kana paine munhu akambonyora izwi iri, asi ini ndinoda iro izwi rekuti 'Clog' yeKambani kana Corporate Blog. Ndakaiwedzera sezwi risingabvumike pane Wikipedia. Kambani Blogs inogona kuve chikomborero kana chituko. Zvinoda zano uye kuenderana kwevabloggi vanobatanidzwa kugadzira Clog:
Inoshanda - yako blog iri kushandira iyo indasitiri? vatengi? tarisiro? makwikwi?
Yakakodzera nguva - kana chimwe chinhu chakaipa kana chakanaka chikaitika, yako blog iri chikamu chekasira zano kuti izwi ribude?
Kutendeseka - pasina iyo gory ruzivo, urikutungamira kumberi nevaverengi vako kana uri kuenda kunoisa spin pairi?
Inokosha - iri kuzobatsira bhizinesi rako mukufamba kwenguva here?
Kuvhara kunogona kurira kunge kwakashata, izvo ndezve chinangwa. Ndinovimba izwi iri rinotambirwa pasirese, nekuti ini handina chokwadi chekuti kuvhara izano rakanaka remakambani. Izvo zvakati, ini handisi kureva kuti kublogi kwakashata kune zano rekambani. Zvakapesana kwazvo, ndinofunga zvinonakidza. Nekudaro, ini ndinofunga pane musiyano wakasarudzika pakati pekublogi nekuvhara. Nekubloga, iye munhu ane rake izwi uye anogona kuratidza ake / manzwiro ake nokutendeseka asinganetseke nezvezvinoitika. Kuvhara, kune rumwe rutivi, kunofanirwa kuve izwi rakabatana rekambani. Yakasvinwa. Inofanira kuva.
Dell akatowana mamwe flack as mifananidzo yelaptop inoputika muJapan haina kutariswa paClog yavo sezvo nhau dzakamhanya dzakatenderedza blogosphere.
Kukanganisa kukuru! Sei iko kukanganisa? Sei ungade kugadzirisa nyaya kune nyika iyo ingangove vashoma vanhu vanoziva nezvayo? Nekuti kana usinga, njodzi iripowo yakanyanya.
Sezvo iwe paunenge uchitsvaga iyo blogosphere yeDell izvozvi, iwe uchawana Exploding Laptop padyo nepamusoro pechinyorwa! Zvibvunze wega izvi… pawakapinza mumusoro wenyaya pane zvawanikwa, wawana chinyorwa kubva kuOne2one chinonakidza here? Wakatomboiwana here pachinyorwa?
Kunyarara ndiko kuuraya kuvimba kwevatengi. Uye nekubloga, makambani ari kupa svikiro rekutaurirana zvinobudirira. Kana isingaratidzike zvavo blog kutanga, vatengi ziva kuti zvine chinangwa kufuratirwa. Nekuda kweizvozvo, chivharo chinoonekwa sechisina basa, chisina kukurumidza, chisina kutendeseka uye chakakosha.
VOIP hofori Skype inogona kunge iri inotevera pane iyo runyorwa. Munguva pfupi yapfuura, vamwe vagadziri muChina vakataura kuti vakadzora mainjiniya e Skype uye vakashandisa software yavo kufonera mumwe munhu uye kuvaita kuti vazive yavo IP kero. Izvi zvine zvirevo zvakakura ku Skype, kuisa kunyorera kwayo mubvunzo. Panzvimbo pokurwisa chikumbiro, Skype yakangozvirasa. Izvi hazvizove zvakanaka kune vashandisi ve internet vaneta. Ndinoziva kuti ini handidi kuzviisa panjodzi.
Saka, chii chako Clogging Strategy? Panzvimbo pekutaura nezve izvo zvauri kuda kutaura nevazhinji (uye nemakwikwi ako), uri chii kwete kuda kukurukura? Ndidzo misoro idzo dzinodzoka kuzokuruma!
Tags: blogosphereclogyemubatanidzwa blogDell
Aug 17, 2006 na3: 03 PM
ndinoziva kuti inotapira asi ini ndinoda iro izwi rakavhara.
unogona here kugadzira dougissmart kune dougissexy?
Aug 17, 2006 na6: 21 PM
dougissexy irimo! Iwe unongoda kupindura kazhinji.